ဒါရိုက်တာအောင်မင်းသိမ်း၏ဇနီး ကိုယ်အင်္ဂါမသန်စွမ်းသူ၊ ဇာတ်ညွှန်းနှင့်ဒါရိုက်တာ ပန်းချီဆရာမသမီးမြတ်ကျော်
by MILI Radio
published on 2013/06/22 07:43:57 +0000
Mandalay FM ပရိတ်ကြီး မင်္ဂလာပါ။
ဒီအစီအစဉ်ကို မြန်မာနိုင်ငံ မသန်စွမ်းသူများ ရှေ့ဆောင်အဖွဲ့က တင်ဆက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ အစီအစဉ်မှာ သောတရှင်များကို အသက် (၃) နှစ်သမီးအရွယ်မှာ အပြင်းဖျားပြီး ခြေထောက်နှစ်ဖက်စလုံး ပိုလီယိုရောဂါကြောင့် ကိုယ်အင်္ဂါ မသန်စွမ်းသူ ဘ၀ရောက်ခဲ့ရပေမယ့် ဘ၀ကို အရှုံးမပေးတဲ့စိတ်နဲ့ ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားပြီး အနုပညာ လောကထဲမှာ ပန်းချီဆရာမ၊ ဗီဒီယိုဇာတ်ညွှန်းနဲ့ ဒါရိုက်တာအဖြစ် ရပ်တည်နေတဲ့ သမီးမြတ်ကျော်နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ (မနွေးဇာခြည်စိုး)
မေး - မင်္ဂလာပါဆရာမ။
ဖြေ - မင်္ဂလာပါ။
မေး - ဆရာမအနေနဲ့ အနုပညာလောကထဲကို စတင်ဝင်ရောက်ဖြစ်ခဲ့ပုံလေးကို ရှင်းပြပေးပါရှင်။
ဖြေ - အနုပညာလောကထဲကိုဆို ဇာကြီးက မွေးကတည်းက ရောက်လာတယ်လို့ ပြောရမှာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဇာကြီးအဖေက ပန်းချီဆရာကြီး ဦးမြတ်ကျော်ပါ။ အမေကတော့ ဒေါ်တင်လှပါ။ အဲဒီတော့ ပန်းချီဆရာကြီးက မွေးဖွားလာတဲ့ သမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကျမ ပန်းချီလောကထဲကို အရင်ဦးဆုံး ရောက်တယ်ပေါ့နော်။ နောက်ကျမ ၁၉၇၉ ခုနှစ်ကနေစပြီး ကျမ ပန်းချီ အနုပညာသင်ကျောင်းကို စတက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ အဲဒီကျောင်းတက်ပြီးတော့ ဒုတိယနှစ်မှာပဲ ကျမ ….. ဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့ ကျမအမျိုးသား ဒါရိုက်တာ ကိုအောင်မင်းသိမ်းနဲ့ ကျမ အဲဒီပန်းချီကျောင်းမှာစပြီး ဆုံဆည်းခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ ဆုံဆည်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် ကျမဆက်ပြီးတော့ ဒီရုပ်ရှင်နဲ့ဗွီဒီယိုလောကထဲကို ရောက်လာခဲ့တာပေါ့။ ကျမ ၁၉၈၁-၈၂ ခုနှစ်မှာ ရန်ကုန် ပန်းချီပန်းပု အနုပညာသင်ကျောင်းကနေပြီးတော့ ကျမ Fine Art နဲ့ ကျောင်းဆင်းခဲ့ပါတယ်။ ကျမ မြ၀တီ၊ ယုဝတီဂျာနယ်၊ ရုပ်ရှင်အမြုတေ မဂ္ဂဇင်းတို့၊ စုံထောက် မဂ္ဂဇင်းတို့ ၀တ္ထုလေးတွေပါပြီး ရေးသားတယ်။ နောက် ကျမ ….. ရုပ်ပြကာတွန်းလေးတွေလည်း ရေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုအောင်မင်းသိမ်းနဲ့ အိမ်ထောင်ကျပြီး နောက်ပိုင်းမှာ သူ့ကို ဘယ်လိုအကူအညီပေးရမလဲ ဆိုပြီးတော့ ဇာတ်ညွှန်းရေးတဲ့ပညာကို စသင်ခဲ့ပြီးတော့ ကျမ ရုပ်ရှင်၊ ဗွီဒီယို ဇာတ်ညွှန်းလောကထဲကို စ၀င်ရောက်ခဲ့တာပါ။
မေး - ဆရာမ အနုပညာလောကထဲကို ၀င်ရောက်ခဲ့တဲ့ အချိန်မှာ ပံ့ပိုးကူညီပေးခဲ့တဲ့ သူများရှိရင်လည်း ပြောကြားပေးပါဦးရှင်။
ဖြေ - အနုပညာလောကထဲကို အရင်ဦးဆုံး ၀င်ဖို့အတွက် ပံ့ပိုးကူညီပေးတာ ဆိုလို့ရှိရင် ကျမရဲ့ အမေပေါ့နော်။ ဇာကြီးဆွဲတဲ့ ပန်းချီသရုပ်ဖော်ပုံတို့၊ မဂ္ဂဇင်းထဲမှာ ပါဖို့အတွက်၊ နောက် ၀တ္ထုတိုလေးတွေ၊ စာမူတွေကို အမေက သူကိုယ်တိုင် မဂ္ဂဇင်းတိုက်တွေကို သွားပြီးတော့ပို့ပေးပြီးတော့ ကျမကို အားပေးခဲ့တာပါ။ ရွေးချယ်ခံရသည်ဖြစ်စေ၊ မခံရသည်ဖြစ်စေ ဒီစာမူတွေကို မညဉ်းမငြူနဲ့ သမီးကြိုးစား၊ ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ အမေကအားပေးပြီးတော့ အမေကိုယ်တိုင် သွားပို့ပေးခဲ့တာပါ။ ဒါ … ကျမ ….ပထမဦးဆုံးကျမကို ပံ့ပိုးကူညီပေးခဲ့တာကတော့ အမေပေါ့နော်။ ကိုအောင်မင်းသိမ်းနဲ့ အိမ်ထောင်ကျပြီးတော့ ဗွီဒီယိုလောကထဲ ရောက်လာတဲ့ အချိန်မှာတော့ အမြင်ဆရာတွေ ဆိုလို့ရှိရင်တော့ ဒါဗွီဒီယိုလောက တစ်ခုလုံးမှာ ကျမထက် အရင်ဦးဆုံး ရောက်နေတဲ့သူတွေအားလုံးဟာ ကျမ ဆရာတွေပါပဲ။ ကိုအောင်မင်းသိမ်းကကျတော့ ကျမလိုက်သွားတဲ့အခါမှာ သူ့အလုပ်ကိုကျမ ကူညီချင်တယ်ပေါ့နော်။ ကျမ တတ်နိုင်တာ ကျမ ဇနီးမယား တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကျမဒီ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်းတွေကို အပျော်၊ အဖော် လိုက်သွားတာမျိုး မဟုတ်ဘဲ သူ့ကို ကူညီပေးနိုင်တဲ့ သူ့ရဲ့ လက်တွဲဖော်အဖြစ် ကျမကလိုက်တာဆိုတော့ ဘာကူညီနိုင်မလဲ။ ကျမတတ်နိုင်တာဆိုလို့ရှိရင် စာရေးတာ၊ အဲဒါကျတော့ ကျမ ဇာတ်ညွှန်းရေးပေးလို့ ရမလားဆိုတဲ့အခါမှ ကိုအောင်မင်းသိမ်းက ကျမကို ဇာတ်ညွှန်းကို သြော် … မင်း … ၀တ္ထုရေးတာပဲ ဆိုပြီးတော့ ကျမကို အလွယ်တကူ ပေးမရေးခဲ့ပါဘူး။ သူက …. ဟုတ်ပြီ …. အဲဒါဆိုလို့ရှိရင် ကျမကို ဒီ Camera Words တွေ၊ အခေါ်အဝေါ်တွေ လေ့လာပါ …. မှတ်တမ်းတင်ပါဆိုပြီးတော့ ကျမကို မှတ်တမ်းရေးနည်းကအစ သူသင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ နောက် … Edit ခန်းတွေပါ သူလိုက်ခိုင်းတယ် …. ကျမကို ကင်မရာ အခေါ်အဝေါ်တွေကအစ လေ့လာခိုင်းခဲ့တဲ့အတွက် ဗွီဒီယို၊ ရုပ်ရှင်နဲ့ ပတ်သက်ရင်တော့ အဓိက ကျမရဲ့ဆရာက ကျမရဲ့ခင်ပွန်း၊ ကျမချစ်သူ ကိုအောင်မင်းသိမ်းပါပဲ။
မေး - အနုပညာလောကထဲ ၀င်ရောက်ခဲ့တဲ့ အခါမှာ အခက်အခဲများစွာကို ဆရာမက မလွဲမသွေ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီအခက်အခဲလေးတွေကို ဆရာမအနေနဲ့ ဘယ်လို၊ ဘယ်ပုံ၊ ဘယ်နည်းများ ရင်ဆိုင်ကျော်လွှားခဲ့တယ် ဆိုတာကို အနုပညာလောကထဲကို ၀င်ရောက်ကြမယ့် လူငယ်အားလုံး သိရှိနိုင်ဖို့ ပြောပြပေးပါနော်။
ဖြေ - အနုပညာလောက ဆိုတာကကျတော့ ကျမတို့ ….. နာမည်ကသာ အနုပညာလောကပါ။ တစ်ကယ်တမ်း ပါဝင်လှုပ်ရှားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကျမတို့ အရမ်းကို ပင်ပန်းခက်ခဲပါတယ် … နက်လည်းနက်နဲတဲ့ ပညာရပ်နယ်ပယ် တစ်ခုပါပဲ။ အရင်ဦးဆုံး ကျမပြောချင်တာကကျတော့ သန်စွမ်းသူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မသန်စွမ်းတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ် လူငယ်တွေအနေနဲ့ အရင်ဦးဆုံး ဘ၀မှာဘာဖြစ်ချင်သလဲဆိုတာကို ကျမကတော့ အရင်စဉ်းစားပါတယ်။ ဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေထဲမှာ ကျမလုပ်နိုင်သလား …. ဖြစ်နိုင်သလား ဆိုတာကိုကျမ ဒုတိယအကြိမ်တွေးတယ် …. ပြီးတဲ့အခါမှာကျရင် ကျမ ဖြစ်ချင်တယ်၊ လုပ်လည်းလုပ်နိုင်တယ်၊ လုပ်လည်းလုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ အချိန်ကျရင် ကျမကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ ကျမဒါကို မဖြစ်ဖြစ်အောင် ပန်းတိုင်ကို ရောက်အောင်သွားတယ်။ ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိမှ သူများကလည်း ကိုယ့်အပေါ် ယုံကြည်မှုရှိမှာပါ။ အဲဒီတော့ ကျမ ဒီအနုပညာလောကမှာ အခက်အခဲတွေကတော့ အများကြီးပါပဲ …. ဒါပေမယ့် တွေ့လာတဲ့ အခက်အခဲ မှန်သမျှကို ကျမကိုယ်ကျမ ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့အတွက် ဒီအနုပညာ လောကမှာရှိတဲ့ အားလုံးကလည်း ကျမအပေါ်မှာ ယုံကြည်မှုအပြည့်ထားပြီးတော့ ကျမလိုအပ်တာ မှန်သမျှကို ပံ့ပိုးကူညီပေးကြတာပါပဲ။ အဲဒီအတွက် လူငယ်တွေဟာ ကိုယ်ဘာဖြစ်ချင်သလဲဆိုတာကို အရင်စဉ်းစားပြီး ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ အရာတစ်ခုကို ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ ကိုယ်တိုင် အရင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြပါလို့ ကျမ ပြောချင်ပါတယ်။
မေး - ဆရာမအနေနဲ့ အနာဂတ်မှာ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမယ့် အနုပညာ လုပ်ငန်းစဉ်များရှိရင်လည်း သိပါရစေရှင်။
ဖြေ - ဆက်လက်လုပ်မယ့် အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကတော့ ကျမ အခုလက်ရှိ လုပ်နေတဲ့ ကျမ ပန်းချီဆွဲတယ်။ ဗွီဒီယိုဇာတ်ညွှန်းရေးတယ်။ ၀တ္ထုတိုလေးတွေ ရေးတယ်။ အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေထဲမှာမှ ကျမအခုလက်ရှိပေါ့နော် …. ကျမလို ဘ၀တူ မသန်စွမ်းတွေအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်၊ တစ်လောကလုံးကလူတွေ သိသင့်သိထိုက်တဲ့ အကြောင်းအရာမှန်သမျှကို ကျမ အရင်ကထက်ပိုပြီးတော့ ဖြည့်စွက်ပြီးတော့ လုပ်ကိုင် သွားမယ်လို့လည်း ရည်ရွယ်ထားတယ်ပေါ့ …. နောက်တစ်ခုက အနာဂတ်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျမငယ်ငယ်တုန်းကတော့ လူငယ်ဘ၀တုန်းကတော့ အဝေးကြီး မျှော်လင့်ချက်တွေ ထားခဲ့ဖူးတာပေါ့ …. ကျမတို့ အသက်တွေ ရှင်သန်နေသမျှ ကျမတို့ ဘ၀တွေရှင်သန်ဖို့၊ စိတ်ဓာတ်တွေရှင်သန်ဖို့ အားမွေးရင်းနဲ့ ကျမ လက်ရှိ လောလောဆယ် ပစ္စုပ္ပန်ကာလမှာ ကိုယ့်အတွက်ကော၊ အများအတွက်ကော အကောင်းဆုံးဆိုတာတွေကို လုပ်ကိုင်၊ ချန်ထားခဲ့ပြီး နေထိုင်သွားမယ်လို့ ကျမ ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်။
မေး - အခုလို ဖြေကြားပေးတဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ မသန်စွမ်းသူများ ရှေ့ဆောင်အဖွဲ့က အထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။
ဖြေ - ဟုတ်ကဲ့။ ဇာကြီးကလည်း အခုလိုဖြေကြားခွင့်ရတဲ့အတွက် မန္တလေး FM ကော၊ မန္တလေး FM ကို နားထောင်နေတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေ အားလုံးကိုရော ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ (မေး - မယုယသူ) (ဖြေ - သမီးမြတ်ကျော်)
လူသားထဲကလူကဏ္ဍကို နားသောတဆင်ပြီး ဝေဖန်အကြံပြုလိုပါက mili.onlineradioprogram@gmail.com သို့ စာဖြင့်ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ သောတရှင်အားလုံးရဲ့ ဝေဖန်အကြံပြုချက်များကို ၀မ်းမြောက်စွာ ကြိုဆိုလက်ခံ နေပါတယ်ရှင်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။ (မနွေးဇာခြည်စိုး)
Download ဒါရိုက်တာအောင်မင်းသိမ်း၏ဇနီး ကိုယ်အင်္ဂါမသန်စွမ်းသူ၊ ဇာတ်ညွှန်းနှင့်ဒါရိုက်တာ ပန်းချီဆရာမသမီးမြတ်ကျော်
Users who like ဒါရိုက်တာအောင်မင်းသိမ်း၏ဇနီး ကိုယ်အင်္ဂါမသန်စွမ်းသူ၊ ဇာတ်ညွှန်းနှင့်ဒါရိုက်တာ ပန်းချီဆရာမသမီးမြတ်ကျော်
Users who reposted ဒါရိုက်တာအောင်မင်းသိမ်း၏ဇနီး ကိုယ်အင်္ဂါမသန်စွမ်းသူ၊ ဇာတ်ညွှန်းနှင့်ဒါရိုက်တာ ပန်းချီဆရာမသမီးမြတ်ကျော်
Playlists containing ဒါရိုက်တာအောင်မင်းသိမ်း၏ဇနီး ကိုယ်အင်္ဂါမသန်စွမ်းသူ၊ ဇာတ်ညွှန်းနှင့်ဒါရိုက်တာ ပန်းချီဆရာမသမီးမြတ်ကျော်
Groups containing ဒါရိုက်တာအောင်မင်းသိမ်း၏ဇနီး ကိုယ်အင်္ဂါမသန်စွမ်းသူ၊ ဇာတ်ညွှန်းနှင့်ဒါရိုက်တာ ပန်းချီဆရာမသမီးမြတ်ကျော်
More tracks like ဒါရိုက်တာအောင်မင်းသိမ်း၏ဇနီး ကိုယ်အင်္ဂါမသန်စွမ်းသူ၊ ဇာတ်ညွှန်းနှင့်ဒါရိုက်တာ ပန်းချီဆရာမသမီးမြတ်ကျော်